Monday 25th May 2020 08:00:47 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Codbixinta xisbiga Dimuqraadiga oo loo sameeynayay qaab email ah ayaa waxay socotay 9 maalmood ee ugu dambeysay. Cudurka Corona ayaa horistaagay in ergada xisbiga ay isu yimaadaan si ay u codeeyaan taasi oo sababtay in qaabka Emil-ka lagu codeeyo.
Ilhaan ayaa tartanka kaga guuleystaya Antone Melton oo ahaa nin madow ah islamarkana si wayn u dhaliilayay waxqabadkeeda intii ay xilka haysay. Xildhibaanada aqalka Congreska Ilhaan Cumar ayaa heshay 65.5% codadkii la dhiibtay, halka Antone Melton oo kaalinta labaad soo galay uu helay 30.9%. Waxaa sidoo kale tartankan is-reerebka xisbiga Dimuqraadiga ku jirtay Leylo Shukri Adan oo ah gabadh Soomaaliyeed.
Tahriibinta Dahabka Oo khilaaf Siyaasadeed Ka Dhaliyey Dalka Hindiya.
Maxkamadaynta Dilka Jamaal Khaashuqji Oo Dalka Turkiga Ka Bilaabatay [Gudaha Ka Akhriso ]
Dowladda Soomaaliya Oo Shaacisay Xilliga Dib Loo Furayo Duullimaadyada Gudaha [Gudaha Ka Akhriso ]
Rabashadaha Ka Socda Dalka Itoobiya Oo Saamayn Ku Yeeshay Somaliland [ Gudaha Ka Akhriso]